Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: မလေးရှားမှာ ဆန္ဒပြသတဲ့လား
by Myo Set on Monday, 25 June 2012 at 01:25 ·
ရခိုင်အရေးအခင်း၏ နောက်ဆက်တွဲအြ­ဖစ် ဘင်ဂလီများနှင့် ဘာသာတူသော မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အုတ်အော်သောင်းနင်းြ­ဖစ်ရပ် တစ်ခုြ­ဖစ်ပွားခဲ့သည်။
ပူးတွဲလင့်ပါအတိုင်း လူ ၂၀၀၀ ခန့် မှ
'STOP KILLING ROHINGYAS IN MYANMAR'
'STOP RAPING ROHINGYA WOMEN'
စသြ­ဖင့် စာတမ်းများ ကိုင်ဆောင်ကာ ငိုကာယိုကာ သရုပ်ြ­ပ ဆန္ဒဖော်ဆောင်သွားကြသည်။
အထက်ပါ ဗွီဒီယိုကလစ်ကို ကြည့်ပြီးသကာလ နီးစပ်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံသား လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မိတ်ဆွေများကို ခခယယ အပူကပ်ပြီး သိလိုသည်များကို ချဉ်းကပ်မေးမြန်းခဲ့ပါ၏။ ထိုမိတ်ဆွေများထံမှ ကြားသိရသော အဖြေစကားများအရ တူညီသော အချက်တစ်ခုမှာ ယခု ဆန္ဒဖော်ဆောင်သူများသည် မလေးရှားနိုင်ငံသားများ လုံးဝ မဟုတ်ပါ ဟူ၏။
.မိတ်ဆွေများ၏ အကူအညီဖြင့်ပင် မလေးရှားမြေအား ရက်အတန်ကြာ မရဲတရဲနင်း၍ အစဆွဲထုတ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့ .... လိုအပ်သော အကူအညီများကို ပေးခဲ့သော ကွာလာလမ်ပူရှိ မိတ်ဆွေများကို အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း အရင် ပြောပါရစေ။
ပထမဦးဆုံး အချက်သည်ကား ယခုဆန္ဒဖော်ဆောင်သူများသည် မလေးရှားနိုင်ငံသားများ မဟုတ်ပါ။ အကြမ်းဖျဉ်း ခွဲခြမ်းကြည့်မည်ဆိုပါက အဆိုပါ ဆန္ဒဖော်ဆောင်သူများထဲတွင်
- တရားမဝင် နေထိုင်သူ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသားများ
- မော်လမြိုင်မှ လာသော မြန်မာမူစလင်များ
- ဘင်ဂလားဒေ့ရ်ှမှ လူကုန်ကူး တင်သွင်းလာသော ဘင်ဂလီများ ပါဝင်ကြသည်။
သက်သေအထောက်အထား ပြချင်သော်ငြား ထောက်ညှာရမည့်သူများကြောင့် ယခုစာစုကို အကျဉ်းချုံး၍ ရေးပါမည်။ မယုံလျှင် ပုံပြင်ဟု မှတ်ပါ။ သို့ သော် ပုံပြင်မဟုတ်ပါ၊ စနစ်တကျ ကြိုတင်ကြံစည်ထားသော လိမ်လည်မှု တစ်ခုအား ဖော်ထုတ်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
တရားမဝင် နေထိုင်သူ အင်ဒိုအများစုသည် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ကြုံရာ ကျပန်းအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေကြသူ များသည်။ အမျိုးသမီးအများစုသည် နေ့ စားဖြစ်စေ၊ နာရီပိုင်းဖြစ်စေ ရပ်ကွက်များတွင် အခကြေးငွေယူ၍ အဝတ်လျှော်၊ အိမ်သန့် ရှင်းရေး စသည့် အလုပ်ပေါင်းစုံကုို လုပ်ကိုင်ရင်း ဝမ်းကျောင်းကြရသူများ ဖြစ်သည်။ သူတို့ တွင် ပုံမှန် အလုပ်၊ ပုံမှန် ဝင်ငွေ မရှိချေ။ ထို့ ပြင် မကြာမီ ကျရောက်လာမည့် သူတို့ ၏ နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် Hari Raya အတွက်လည်း သူတို့ တွင် ငွေလိုသည်မှာ မုချပင် ဖြစ်သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံသား မိတ်ဆွေများမှ ပြောပါသည်။ တရားမဝင် နေထိုင်သူ၊ အလုပ်အကိုင်မဲ့သော ဘင်ဂလီများ မလေးရှားတွင် တပုံတခေါင်း ရှိပါသည် ဟူ၏။ ထို့ အပြင် အနှီပုဂ္ဂိုလ်တို့ ၏ အပြုအမူ အနေအထိုင်သည် လယ်ပြင်တွင် ဆင်သွားသလို ထင်ရှားပါ၏ ဟူ၏။ ထိုမျှမက ယခု ဗွီဒီယိုကလစ်တွင် မျက်ရည်လည်ရွဲ ပါးစပ်အပြဲသားဖြင့် 'မြန်မာပြည်တွင် ရိုဟင်ဂျာများ အသတ်ခံနေရပါသည်' ဟု ကင်မရာရှေ့ဝယ် အပီအပြင်သယ်နေသူ အနှီပုဂ္ဂိုလ်များသည် အလုပ်လက်မဲ့ ဘင်ဂလီများ ဖြစ်ဖို့သေချာပါသည် ဆို၏။
ဘင်ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ထိုင်းနိုင်ငံအား ကျော်ဖြတ်၍ မလေးရှားနိုင်ငံအရောက် လူကုန်ကူးမည် ဆိုပါက ပေါက်ဈေး တစ်ဦးလျှင် မလေးရှား ရင်းဂစ် ၂၅,၀၀၀ ဝန်းကျင် ရှိပါသည်။ သူတို့ အလုံးအရင်း ရာနှင့်ချီ၍ ဝင်ပါသည်။ သူတို့ တွင် ငွေအသပြာ နတ္ထိပါ။ သူတို့ အား ပံ့ပိုးကူညီ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေသူ ပွဲစားအမည်ခံသူများ ရှိပါသည်။ သူတို့သည် လက်ဗလာဖြင့် ရောက်လာကြပြီး ဆီအုန်းခင်းများသို့ အလုပ်လုပ်ရန် ပို့ဆောင်ခြင်း ခံရပါသည်။ သူတို့၏ ဝန်ဆောင်ခကို လစာမှ အရစ်ကျ ဖြတ်ယူပါသည်။
ဤမျှ များပြားလှသော ဘင်ဂလီများကို လူကုန်ကူးရန် အခကြေးငွေသည် မည်သည့်အရပ်မှ လာသနည်း။ မည်သူတွေက နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကွယ်နေသနည်း။ ယခုဆန္ဒပြပွဲအတွက် ထောင်နှင့်ချီသော ဆီအုန်းခင်းများမှ ဘင်ဂလီများနှင့် မြို့တွင်းမြို့ ပြင် မြေပေါ်မြေအောက်ရှိ အလုပ်လက်မဲ့ ဘင်ဂလီများသည် မည်သို့ မည်ပုံ ဇာတ်တိုက်ထားသည့်အလား စုဝေးလာပါသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် သတင်းလိမ်ဓါတ်ပုံများကို တညီတညွတ်တည်း ကိုင်ဆောင်လျက် တလေသံတည်းထွက် အလိမ်ကြီး လိမ်နေပါသနည်း။ သူတို့၏ နောက်ကွယ်တွင် ကြိုးကိုင်သူ ရှိပါသလော။ ရှိကောင်း ရှိပါလိမ့်မည်။ သက်ဆိုင်သူများ အသိဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဘိလပ်ဗိန္ဓောဆရာ ဒေါက်တာ အာနိုး (အာနိုးသည် ဗလကြီးပါသည်) အသိဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ထားလျှင်လည်း နေရပါမည်။ အရဲကိုး၍ ဆက်တိုးပါရစေတော့။
နောက်ကွယ်မှ ဒါရိုက်တာများသည် ငွေကြေးတောင့်တင်းပါသည်။ ရှေ့တန်းမှ အင်ဒိုများ နှင့် ဘင်ဂလီများသည် ငွေရေးကြေးရေး ကျပ်တည်းပါသည်။ သူတို့သည် တလ လစာ ရင်းဂစ် ၆၀၀ကျော်ခန့် ရလျှင်ပင် တနေ့ ၁၆ နာရီဆိုလည်း ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ အိမ်သာပင်ဆေးသည့်သူများ ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် ယခုလို ကတ်ပြားလေးထောင်ကာ အော်ပေး ဟစ်ပေးရုံဖြင့် လွယ်လွယ်ကူကူ ငွေရမည်ဆိုလျှင် ထိုအလုပ်မျိုးကို သူတို့ ငြင်းပါမည်လား။ ဘင်ဂလီသည် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသား မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့် အနှီ အင်ဒိုအမျိုးသမီးများ တက်မတတ် ငိုယိုနေပါသနည်း။ စဉ်းစားစရာပါ။ Kalan Press မှ သတင်းလိမ် ဓါတ်ပုံသည် သူတို့ လက်ထဲ မည်သို့ ရောက်နေသနည်း။ လက်လှမ်းမီသလောက် ဆိုရလျှင် သူတို့သည် အင်တာနက်သုံးသော လူတန်းစား မဟုတ်ပါ။ သူတို့၏ လုပ်ခလစာနှင့် အလျင်မှီအောင် မနည်းရုန်းကန်နေရသူများ ဖြစ်ပါသည်။
ယခု လုပ်ရပ်သည် မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာများနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံသားများအား ရန်တိုက်ပေးသည့်သဘော သက်ရောက်ပါသည်။ စီစဉ်သူများ အလွန်အကွက်မြင်ပါသည်။ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေး ပျက်ပြားစေရန် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေသော သူတို့၏ လုပ်ရပ်အား စက်ဆုပ်မိပါသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ရွှေမြန်မာများအနေဖြင့် ဘင်ဂလီထောက်ခံသူများသည် မလေးရှားနိုင်ငံသားများ မဟုတ်ကြောင်းကို ခွဲခြားမြင်စေချင်ပါသည်။ ရွှေမြန်မာများ ကျန်းမာ ချမ်းသာ၍ ဘေးရန်ကင်းကွာကြပါစေ။
(အထက်ပါစာစုဟာ မလေးရှားနေ မြန်မာမိတ်ဆွေတစ်ဦးမှ ပေးပို့လာသော အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ လေ့လာနိုင်ကြပါသည်။)
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 20:23
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: မလေးရှားမှာ ဆန္ဒပြသတဲ့လား . All Rights Reserved